सम्पादकीय | Everest Times UK | Page 4
एभरेस्ट टाइम्सले दस वर्ष पार गरेको छ । हामी दसौं वार्षिकोत्सवको तयारमा छौं । यो अवधि हाम्रो लागि सजिलो बाटो थिएन । स्वदेशमा त पत्रिका चलाउन मुस्किल भइरहेको बेला प्रवासबाट पत्रिका निकाल्नु कम...	Read more
नेपालीले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाएको धेरै भइसक्यो । हरेक किसिमका स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै आउ“दा कतिपय सवालमा भने बढी भड्किलो र समाजमै नकारात्मक पर्ने काम पनि भएका छन् । नागरिकले स्वतन्त्...	Read more
तीन वटै तहका सरकारले बढाएको करविरुद्ध सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । विकास र सेवाको कामलाई अगाडि बनाउन कर लिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दावी गरे पनि सेवाग्राही चरम मारमा परेको भन्दै सर...	Read more
न्यायालयको नेतृत्वमाथि प्रश्न
सबैको भरोसाको अन्तिम निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत अर्थात न्यायालय नै हो । न्यायालयको नेतृत्वका बारेमा अहिले राजनीतिक रुपमा देखिएको वादविवाद साँच्चै उचित कि अनुचित बन्ने प्रश्न खडा भएको छ । राज...	Read more
चार साता लामो १५औं अनसन बसेर डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई घुँडा टेकाइछाडेका छन् । सरकार अनसनरत डा. केसीको सबै माग पूरा गर्न सहमत भएका छन् । अब यसो हुँदैमा अब डा. केसी कहिल्यै अनसन बस्दैनन् त...	Read more
डा. गोविन्द केसीको १५औं श्रृङ्खलाको अनसनले अहिले सडक र सदन तातिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका लागि राम्रो निहु पनि मिलेको छ । सडक आन्दोलन वा अनसनबाट नभई जनप्रतिनिधिको थलो सार...	Read more
परापूर्वकालमा काठमाडौ उपत्यका तलाउ थियो । मञ्जुश्रीले चोभारको डा“डो काटेर पानीको निकास गरेपछि उपत्यकामा बस्ती बसाएको मानिन्छ । तर अहिले भने वर्षाको पानीले निकास नपाउ“दा राजधानी तलाउमा परिणत...	Read more
नेपाल वायुसेवा निगम स्थापना भएको पनि ६० वर्ष पुगिसकेको छ । नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक एक मात्र निकाय भनेको नेवानि नै हो । यसले सेवा सुरु गरेको यतिका वर्षसम्म पनि उनीसँग मात्र सरकारी स्वामित...	Read more
दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पछिल्लो केही समययता कठोर बन्दै गएको देखिएको छ । त्यो पनि नियम कानुन वा प्रणालीको व्यवस्था गरेर होइन, आदेशको भरमा यसले केही विषयहरुमा सरकार अघि बढे जस्तो गरेर पछि हट्न...	Read more
संसारभर समृद्धिका मुद्दा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणले नेपालको समृद्धिको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई बनेको सरकारले अगाडि बढाएको ‘सम...	Read more